यी युवतिको शरीर र सिरानीमा ‘राई ईज किङ’, राजेश लेख्छन् ‘तपाईं राम्री हुनुहुन्छ’ - Purbeli News
Trending # प्रमोद खरेल10# ज्योति मगर8# बोके दाह्री8# दुर्गेश थापा7# भूपेन्द्र तुम्बाहाम्फे6# दिपाश्री निरौला6# सेन्ट्रल प्लाजा5# पूर्वेली म्युजिक अवार्ड4
यी युवतिको शरीर र सिरानीमा ‘राई ईज किङ’, राजेश लेख्छन् ‘तपाईं राम्री हुनुहुन्छ’
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत्र २९, २०७६ समय: ८:१६:२१
ईटहरी/ नेपाली सुगम संगीतका सदाबहार गायक राजेश पायल राईलाई नचिन्ने सायदै होलान् । उनका दर्जनौ गीतहरुले सम्पुर्ण नेपालिको मन छोएको छ । उनका प्रायः गीतहरूले ख्याती कमाएका छन् भने उनी माथी फ्यान फलोईङ पनि उत्तिकै छन् । नेपालमा मात्र हैन बिदेशमा समेत लोकप्रियता हासिल गरेका राजेशलाई पछ्याउने युवतिको ताती पनि लामै छन् ।
यता राजेश पनि हालसम्म अबिवाहित नै छन् । कोरोनाका कारण लकडाउनले उनी यतिबेला अन्य कलाकार तथा नेपालीहरु झै फुर्सदमा छन् । काममै रहदा पनि सामाजिक संजालमा अप्डेट भैरहने उनी यतिबेला अझै बाक्लो अप्डेट भैरहेका छन् । एक पोस्टमा उनको हदैसम्मको फ्यान रहेको देख्न सकिन्छ । उनले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा पोस्ट गरेको फोटोमा रहेकी एक युवतिले राई ईज किङ लेखेको टिसर्ट लगाएकि छिन् ।
यतिमात्र हैन ती युवतिले आफ्नो बेडमा रहेको सिरानिमा समेत राई ईज किङ प्रीन्ट गरेकी छन् । निकै सजिसजावट देखिने बेडमा उनी मन्द देखिन्छन् भने सो युवती नेपालीमुलकी युके निवासि हुन । राजेशले उनको नाम चुन्कु शेर्पा भनेर लेखेकी छन् । उनले लेखेका छन “तकिया (सिरानि) मन परो हेहेहेहे तपाईं त राम्री हुनुहुन्छ नै !! उहा युके स्थित मेन्व्हेस्टर मा बसोबास गर्नुहुन्छ उहा को नाम चुन्कु शेर्पा हो ,फोटो को लागी सम्मान !!”
आँचल भन्छिन ‘म हाँसेको देखेर रिसाउनेलाई नि लभ यू’
प्रिय तिमीलाई भन्दै आए रोहित मास्के
‘प्रेम गीत ३’का निर्देशक गुरुङको निधन
ब्ल्याक ड्रेसमा खुलेको अभिनेत्री साम्राज्ञीको सौन्दर्यता (फोटो सहित)
प्रेम गीत–३’ निर्देशक छेतन गुरुङको निधन
पलको राहत बितरणमा दुर्गेशको साथ्, बाग्लुङका पीडितलाई सहयोग गर्न हिडे